Mifanaretsaka ny tanora mitady asa ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny taham-pahaterahana ambony dia singa iray hamantarana fa mbola an-dalam-pandrosoana ny firenena anankiray. Isan’ny firenena manana taha ambony raha I Madagasikara. Mahatratra 37,13/1000 ny taha raha ho an’i Madagasikara (loharano : http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ma&v=25&l=fr). Ary laharana faha 18 i Madagasikara maneran-tany amin’io taha io. Tombanana any amin’ny 300 000 isan-taona ny tanora miditra amin’ny tsenan’ny asa eto Madagasikara. Mpifaninana ireo eo amin’ny fitadiavana asa fa tsy mpinamana intsony.
“Mihasarotra ny fivelomana, sady vintana ihany koa no ahitana asa amin’izao”, hoy ny filazan’ireo tanora miandry fiantsoana eo ambavahadin’ny Cottonline Antsirabe. Maro ireo orinasa afakaba ao an-toerana, ary saika amin’ny tapany atsimon’ny tanàna avokoa no misy ireo toeram-piasana ireo. Samy mampiasa olona an-jatony maro ireo orinasa ireo, saingy mbola maherin’izay lavitra ny isan’ireo tanora mitangorona mitady asa amin’izy ireny raha ny ao an-tanànan’Antsirabe. ny ankabeazan’ireo olona mpitady asa ireo, dia tanora manodidina ny valo ambiny folo taona ka hatramin’ny telo-polo taona eo ho eo. Raha ny fanehoan-kevitr’i Landy Rakotoarivelo, mpahay lalàna mikasika ny asa, dia antony isankarazany no mahatonga ny zaza malagasy hiroso amin’ny sehatry ny asa avy hatrany na dia mbola tokony hanohy fianarana aza. Toa an’ny sasany amin’ireto tanora ireto, dia manenina noho ny sitrapo nitsoaka an-daharana tany an-dakilasy. Misy kosa anefa no tena tsy fidiny, satria mihamafy ny fiainana ary tsy afaka ny hifampitazam-potsiny amin’izao fa tsy maintsy mifanampy ny ao an-tokantrano. “Mandritra ny herinandro, maraina antoandro hariva afa-tsy ny asabotsy sy alahady, na danihan’ny hainandro aza dia mikiry sy manantena ihany izahay eto”, hoy ny nambaran’ny tovolahy iray, miaraka mipetraka amin’ireo namany mitandavana amin’ny sisin’ny arabe anoloan’ny orinasa Aquarelle Ambohimena. somary mandany andro sy fotoana ary mampijaly aza ny fiandrasana ny valin’ny fangatahan’asa. Tsy mifidy asa atao na ho mpanao zaridaina na ho mpifehy ao anaty orinasa. Tsy ambakan’izany ihany koa ny fanantenan’ireo mpianatra sy mpiofana izay mbola milofo amin’ny fianarana tanteraka, mba hahita ny soa sy ny tsara kokoa.
Mikendry toerana tsaratsara
Tao anatin’ny roa taona monja, nanomboka ny 2013, dia lasa feno karazan-tsekoly misy lalam-piofanana maro ao Antsirabe izay mamolavola tanora ho tonga olom-banona. Vato misakana an’ireo mpianatra vao nivoaka tamin’ny fianarana norantovany anefa ny fidirana amin’ny tontolon’ny asa satria efa feno daholo ny toerana amin’ireny orinasa ireny. Na dia izany aza, “tsy ho very maina velively ny fotoana lany rehetra tany am-pianarana, ary ny olona mahay tsy mba very mandeha rahateo”, raha ny fanazavan’ny mpianatra iray tao amin’ny oniversite ASJA. Mitaraina manko ireto zatovon’Antsirabe vao misondrotra satria lahoana mihitsy vao voaray ho tena mpiasa raikitra. Zary ny asa an-tselika sisa ankehitriny no ataon’ny olona izay efa leo miandry asa atolotra eny amin’ny orinasa afak’aba fivelomana. Saingy araka ny fomba fitenintsika amin’ny andavanandro dia tsy misy ny asa ratsy, afa-tsy ny mangalatra ihany, fa miankina amin’ny fanajana azy ihany ny maha tsara sy mampisondrotra azy. Mampanontany tena ihany raha ny zava-misy iainan’ny tanora amin’izao fotoana izao raha ny voalazan’ity raim-pianakaviana ity satria, be dia be loatra ireo malagasy mikaroka asa, ary torak’izany ny olan’ny ao Antsirabe manokana. Ka ho aiza ireto tanora anarivony mivoaka amin’ny fianarana isan-taona? Mampatahotra ny mponin’Antsirabe ny fiombon’ny asa ratsy toy ny vaky trano, ny sinto-mahery sy ny fangaronam-paosy tato ho ato. Koa hetahetan’izy ireo ny hisian’ny fijeren’ny tomponandraiki-panjakana any ifotony ny vahaolana hanomezana asa ny tsy an’asa sy ireo tanora maro be mangetaheta izany !